Edirne မြူနီစီပယ်ပံ့ပိုးမှုစီမံကိန်းကနေ Eurasian လမ်း - rayhab ဖြစ်ပါသည်
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး22 EdirneEdirne မြူနီစီပယ် Eurasian လမ်းပံ့ပိုးမှုစီမံကိန်းကနေ
12 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 22 Edirne, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
အဆိုပါစည်ပင်သာယာလမ်းစီမံကိန်းများကို avrasya ထံမှ edirne ထောက်ခံမှု
တူရကီအတွက် Lycian Way ကို, Evliya Celebi Way ကိုနှင့် Phrygian အဘိဓါန်လမ်းများစွာကိုသမိုင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုလမ်းကြောင်းတူရကီယဉ်ကျေးမှုလမ်းကြောင်းများအသင်းမှထွက်သယ်ဆောင်, "ဥရောပအာရှလမ်းမကြီး" ဟုအဆိုပါစီမံကိန်းတွင်ပါဝင်သူများ၏ Edirne မြူနီစီပယ်မြို့မြှင့်တင်ရေးကိုအထောက်အကူပြုအဖြစ်စီမံကိန်းကိုအထောက်အကူပြုမည်ကိုပွငျဆငျအဖြစ်။
ဥရောပကောင်စီရည်ညွှန်းဖို့ Eurasian လမ်းမကြီးလက်မှတ်များအတွက် Cross-ယဉ်ကျေးမှုလမ်းကြောင်းများနှင့်အတူနယ်စပ်ကိုဆက်သွယ်အီတလီနိုင်ငံမှတူရကီမှတစ်ဆင့်ယဉ်ကျေးမှုလမ်းကြောင်းများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်မြှင့်တင်ရေးအသင်း (CRA) အတွက်တာဝန်ရှိဖြစ်သောတူရကီ, မြောက်ပိုင်းဂရိနိုင်ငံနှင့်ဘော်လကန်အတွက်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်း၏ဆောက်လုပ်ရေး သူတို့ရဲ့ပြင်ဆင်မှုကိုဆက်လက်။ ပါဝင်အဖွဲ့အစည်းများ၏ Edirne မြူနီစီပယ်အလုပ်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်အဖွင့်အစည်းအဝေးနှင့်အတူစတင်ခဲ့ပြီးဘယ်မှာစီမံကိန်းများပါဝင်သည်။
Project မှအလုပ်ထို့နောက်ဥရောပလမ်းကြောင်းစီမံခန့်ခွဲမှုတွေ့ကြုံခံစားဖို့ကာယကံရှင်များနှင့်အတူအီတလီနိုင်ငံမှတစ်ဦးအလည်အပတ်နှင့်အတူဆက်လက်။ အဆိုပါဒေသခံအစားအစာကနေအစားအစာအရသာနှင့်မြို့ရဲ့ရိုးရာမုန့်အစီအစဉ်၏အစအဦးမှာ Monte Sant'Angelo မြို့၏သမိုင်းဆိုင်ရာအင်တာနက်ဆိုက်များတွင်သွားရောက်လည်ပတ်နှင့်အတူဆက်လက်။ လည်းအားလုံး Francigena မှတစ်ဆင့်ယဉ်ကျေးမှုလမ်းကြောင်း၏တောင်ဘက်အစိတ်အပိုင်းအတွက်ဖြေဆိုသူနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောနေ့ရက်ကာလအပေါ်ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက်လမ်းလျှောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်။ လမ်းကြောင်းတလျှောက်ကိုဖန်ဆင်းဒီလမ်းလျှောက်, လမ်းကြောင်းပိုပြီးနီးနီးကပ်ကပ်တွေ့ကြုံခံစားဖို့အတော်လေးအထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ ငါတို့သည်လည်း Bari က EAVF ကိုယ်စားလှယ်များတက္ကသိုလ်မှကောင်းသောအလေ့အကျင့်၏ဥပမာနဲ့တန်ဖိုးရှိရှိအစည်းအဝေးကိုကျင်းပခဲ့သည် shared ။
Project မှအလုပ် Bursa Nilüferမြူနီစီပယ်ရဲ့အိမ်မှာဆက်ပြောသည်။ တူရကီအကြားရှိမြို့ပြလူ့အဖွဲ့အစည်းဆွေးနွေးပွဲနှင့် Grant ကအစီအစဉ်ကထောက်ခံအီးယူ (SCD-V ကို) စီမံကိန်း Misia နှစ်ရက်တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဥရောပမှတစ်ဆင့် Francigena အဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းစေမှုများရှိဆဲနှင့်အသင်းပြည်ထောင်စုထံမှအီတလီ, ဂရိအယ်လ်ဘေးနီးယား "Tirana Express ကို" အနုပညာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအသင်းအစ္စတန်ဘူလ်ကနေ "Egnatia လမ်း" နှင့် "Sultan Trail" ဖောင်ဒေးရှင်းအနေဖြင့်တောင်တက်အသင်းက, နယ်သာလန်, "သင်၏ Eco Trace" မှ အဆိုပါ Edirne မြူနီစီပယ်နှင့် Izmit ၏မြူနီစီပယ်ကနေအရာရှိတွေပူးပေါင်း "Walking အစ္စတန်ဘူလ်" "သည်းခံလမ်းမကြီး" ထက် Izmit Group မှအဖြစ်စီမံကိန်းအသင်းမှကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်သူများထဲမှမှ။
On-ကီလိုမီတာတောင်တက်လမ်းကြောင်း Mysia နည်းလမ်းများ 9,5 ဧည့်သည်များအတွင်းလှုပ်ရှားမှုများလည်းချမှတ်ခြင်းကိုမြင်ရဖို့အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်စားစရာများအသင်း၏မူဘောင်အတွင်းအဖြစ်အပျက်၏သင်တန်းသားများ, ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်အစည်းအရုံးအတွက် Nilufer ကိုယ်ပိုင်အမျိုးသမီးများနေ့, Atlas ကျေးရွာကိုလည်းဖြည့်ဆည်းရန်အခွင့်အလမ်းကိုရှာတွေ့သည်အမျိုးသမီးကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်အစည်းအရုံးသွားရောက်ခဲ့သည်။ သဘာဝတရားစီမံကိန်းမိတ်ဖက်ပြီးနောက်လမ်းလျှောက်, နှင့်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် Association ကတည်ထောင်ခဲ့ပြီးရပ်ကွက် Lausanne စာချုပ်ထွက်ခွာသွား၏Görükle Bursa Nilüferမြူနီစီပယ်အတွက်ချိန်းအိမ်သွားရောက်ခဲ့သည်။
'' Eurasian လမ်းမကြီး Walking '' အတွင်းဥရောပသမဂ္ဂတို့ကငွေကြေးထောက်ပံ့နေတဲ့စီမံကိန်းဟာစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုကြသောအခွင့်အာဏာဗဟိုဘဏ္ဍာရေးနှင့်စာချုပ်များယူနစ်သည်နှင့်အီးယူ၏သမ္မတနိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ TC ဝန်ကြီးဌာနအရပ်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်းဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ်5ကဆောင်ရွက်။ ကာလထောက်ပံ့ငွေအောက်မှာဆုချီးမြှင့်သည့်စီမံကိန်းများကိုတစ်ဦးဖြစ်သည်။ အဆိုပါလျှောက်ထားယဉ်ကျေးမှုလမ်းကြောင်းများအသင်း (CRA), အီတလီမှာဥရောပသမဂ္ဂမှတစ်ဆင့် Francigena ဂရိနိုင်ငံအတွက် (EAVF) Trace နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအသင်း (TAT) ပူးပေါင်းကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်၏ဤစီမံကိန်းကို။
Aladag နှင်းလျှောစီးဧရိယာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ကနေ Konya မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး 29 / 01 / 2014 Konya မြို့တော်ဝန် Tahir Akyürek, Aladag ထံမှ Konya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်နှင်းလျှောစီး Aladdin စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုအဖွဲ့သူတို့ဘဝမှနှင်းလျှောစီး Center က Project မှ pass မြှို့နယ်အတွင်းရှိ၎င်းတို့၏အရင်းအမြစ်များကိုစည်းရုံးမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောသည်။ Akyürekဒေသခံရွေးကောက်ပွဲÇiftliköz၏အလုပ်၏အတိုင်းအတာ Derbent ခရိုင်မြို့သွားရောက်ခဲ့သည်။ နယူးမြို့တော်မြူနီစီပယ်အက်ဥပဒေနှင့် Derbent ရဲ့အလယ်ပိုင်းခရိုင်တစ်Akyürekဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဖော်ပြသူထုတ်ဖော်ပြောဆိုနီးကပ်စွာ Derbent ၏ခရိုင်အတွင်းရှိထွက်သယ်ဆောင်အလုပ်နောက်သို့လိုက်ကြ၏။ Akyürek "Derbent မြို့တော်ဝန် Hamdi Acer က, တူရကီကဒီမှာတည်ထောင်ရန်ပေးဖို့ကြိုးစားကြတယ်။ ကျနော်တို့ကအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်အရေးကြီးဆုံးနှင်းလျှောစီးစင်တာများတဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ အဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းစေမှုများရှိဆဲဤအချက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ metropolitan'll အသုံးပြုမှုနှင့်အတူနိုင်စွမ်းသမ္မတ။ မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ...
အဆိုပါ Edirne မြူနီစီပယ်ကနေ traffic သင်္ကေတပြစည်းမျဉ်းများ 21 / 01 / 2015 Edirne မြူနီစီပယ်ယာဉ်အသွားအလာသင်္ကေတပြစည်းမျဉ်းမှ: လိုအပ်သောအမှတ်အသားများကိုယူပြီး Two-လမ်းမော်တော်ယာဉ်အသွားအလာသင့်လျော်စွာထုတ်ပြန်ချမှတ်ကြောင်းအစီရင်ခံပြီးနောက် Edirne မြူနီစီပယ်, တံတားအကြားကျန်ရှိလမ်းကြောင်း Cumhuriyet မူလတန်းကျောင်းနှင့်အတူမြစ် Tunca အပေါ်ထွက်သယ်ဆောင်။ တံတားနှစ်ခု-လမ်းမော်တော်ယာဉ်အသွားအလာတော်ဖန်ဆင်းထားသည်အကြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဦးစီးဌာနအနေဖြင့်ရေးသားထားသောကြေညာချက်ထဲမှာ Edirne မြူနီစီပယ်, "ကျနော်တို့ရဲ့ပြည်နယ်, အ Tunca မြစ်၏ဝင်ပေါက်၏Kapıkuleဦးတည်ချက်အစီအမံသစ်ကိုတံတားမှဝင်ရောက်ခွင့်လမ်းများ၏စည်းမျဉ်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာနှင့်အတူကျန်ရှိနေသေးသောလမ်းကြောင်းများပေါ်တွင်လိုအပ်သောအမှတ်အသားများသူရီပတ်ဘလီကန်မူလတန်းကျောင်းအပေါ်ဆောက်လုပ်ရေးဆက်လက် ကပုပ္ပနိမိတ်နှင့်တံသင်အာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်ပေသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားများကိုမှလေးစားမှုနှင့်အတူထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်, "ဟုဆိုသည်။
ပြင်သစ်ကနေကူညီပံ့ပိုးရန် Izmir ရဲ့ Coastal လမ်းမကြီးလမ်းရထားလိုင်းကိုစီမံကိန်းများကို 14 / 11 / 2012 Izmir ရဲ့ Coastal လမ်းမကြီးလမ်းရထားလိုင်းကိုစီမံကိန်းအတွက်ထောက်ခံမှုဟာအံ့သြစရာမှပြင်သစ်ထံမှလာ၏။ ထောက်ခံမှုပြင်သစ်မှလာအွန်လမ်းရထားလိုင်းကိုစီမံကိန်း၏လူအံ့သြစရာအတူတက်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါလိမ့်နိုင်ရန်အတွက် Coastal အဝေးပြေးသက်သာရာနှင့်ဖွံ့ဖြိုးနေဖြင့်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ရဲ့မြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး။ Izmir နှင့် Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အတွက်မြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းအံ့အားသင့် Coastal လမ်းမကြီးလမ်းရထားလိုင်းကိုစီမံကိန်းအတွက်ထောက်ခံမှု '' ကတီထွင်အွန် (IMM) ၏လူတို့နှင့်အတူတက်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါလိမ့်နိုင်ရန်အတွက်ပြင်သစ်ထံမှလာ၏။ ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိအစ္စတန်ဘူလ်နှင့်ပြင်သစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီ Kayseri အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းများ (AFD) ကိုအထောက်အပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်ယခု Izmir အတွက် Coastal လမ်းမကြီးလမ်းရထားလိုင်းကိုစီမံကိန်းကိုမျက်လုံးမှိတ်ပြတယ်။ သူတို့ယခုအထိအများကြီးစီမံကိန်းများကိုထောက်ခံကြောင်းဖော်ပြထားသည် AFD ဒေသခံအစိုးရ ...
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: အောက်တိုဘာလ41971 PehlivanköyKapıkuleလိုင်း-Edirne-အစ္စတန်ဘူလ်-Edirne လိုင်းများဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် 229 ကီလိုမီတာ ... 04 / 10 / 2015 ယနေ့တွင်သမိုင်းအောက်တိုဘာလ41860 အတွက် Constanta-Chernov (Boğazköy), မျဉ်းစစ်ဆင်ရေးများအတွက်ဖွင့်လှစ်ထားခဲ့သည်။ ဒါဟာအချိန်ကိုစောင့်ကြည့်တော့တာပဲ။ (64,4 ကီလိုမီတာ။ ) Haydarpaşa-İzmit41872 အောက်တိုဘာလ, အ Haydarpasa မီးရထားလမ်း၏ပထမအစိတ်အပိုင်းကို Tuzla 14 လအတွင်းပြီးစီးခဲ့တဲ့အခမ်းအနားနှင့်အတူဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တက်တူရကီမှ Haydarpasa-Izmit လိုင်း extension ကိုမှ Deutsche Bank ၏အောက်တိုဘာလ41888 Georgevo အတွက် Siemens သမ္မတ, နှင့်လိုက်လျောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါလိုက်လျော 99 နှစ်ပေါင်း3တစ်နှစ်ဆောက်လုပ်ရေးကာလမှလက်ျာဘက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Deutsche ဘဏ်, Haydarpasa-Izmit လိုင်းလည်း6သန်းပြင်သစ်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ အဆိုပါလိုက်လျောသဘောတူညီမှုပြည်သူ့လုပ်ငန်းစိတ်ဝန်ကြီးဌာနတို့အကြားလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် Stutgard-vvürtembergissch Vereinsbank မန်နေဂျာဖို့ pasha နှင့်အတူကွာလာလမ်ပူ dr.alfred ။ လိုက်လျောအမိန့်ပြန်တမ်း၏နေ့စွဲ 30 စက်တင်ဘာလ 1888 ခဲ့သည်။ ...
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: အောက်တိုဘာလ41971 PehlivanköyKapıkuleလိုင်း-Edirne-အစ္စတန်ဘူလ်-Edirne လိုင်းများဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် ... 04 / 10 / 2013 ယနေ့တွင်သမိုင်းအောက်တိုဘာလ41860 အတွက် Constanta-Chernov (Boğazköy), မျဉ်းစစ်ဆင်ရေးများအတွက်ဖွင့်လှစ်ထားခဲ့သည်။ ဒါဟာအချိန်ကိုစောင့်ကြည့်တော့တာပဲ။ (64,4 ကီလိုမီတာ။ ) Haydarpaşa-İzmit41872 အောက်တိုဘာလ, အ Haydarpasa မီးရထားလမ်း၏ပထမအစိတ်အပိုင်းကို Tuzla 14 လအတွင်းပြီးစီးခဲ့တဲ့အခမ်းအနားနှင့်အတူဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တက်တူရကီမှ Haydarpasa-Izmit လိုင်း extension ကိုမှ Deutsche Bank ၏အောက်တိုဘာလ41888 Georgevo အတွက် Siemens သမ္မတ, နှင့်လိုက်လျောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါလိုက်လျော 99 နှစ်ပေါင်း3တစ်နှစ်ဆောက်လုပ်ရေးကာလမှလက်ျာဘက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Deutsche ဘဏ်, Haydarpasa-Izmit လိုင်းလည်း6သန်းပြင်သစ်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ အဆိုပါလိုက်လျောသဘောတူညီမှုပြည်သူ့လုပ်ငန်းစိတ်ဝန်ကြီးဌာနတို့အကြားလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် Stutgard-vvürtembergissch Vereinsbank မန်နေဂျာဖို့ pasha နှင့်အတူကွာလာလမ်ပူ dr.alfred ။ လိုက်လျောအမိန့်ပြန်တမ်း၏နေ့စွဲ 30 စက်တင်ဘာလ 1888 ခဲ့သည်။ ...
Edirne, Edirne မြန်နှုန်းရထားထံမှ Bircan လက်ထောက်အခြားနွေဦးရှိခဲ့ 16 / 12 / 2015 Edirne လက်ထောက် Bircan, Edirne Edirne လက်ထောက်အတွင်းအခြားနွေဦးမြန်နှုန်းရထားခဲ့ Bircan Edirne Edirne အကြိမ်ကြိမ်သူသည်နောက်တဖန်ညာဖက်ပေးထားထုတ်လုပ်မှု၏တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာစတင်မမြန်နှုန်းမြင့်ရထားများအတွက်ကြောင့်နေ့စွဲရွှေ့ဆိုင်းဆိုပါတယ်သင်သူတူရကီဟာဂရန်းအမျိုးသားလွှတ်တော်အစီအစဉ်သယ်ဆောင်ဟုပြောသည်။ Edirne မြန်နှုန်းရထားများ၏လှုပ်ရှားမှုများလွန်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့အခါသင်မေးလျှင်တိကျမ်းစာ၌လာသည်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုပေးခြင်း Bircan, ပို့ဆောင်ရေး, သင်္ဘောများနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Binali Yildirim ဖြစ်ကြသည်။ ပေးထားသောမြန်နှုန်းရထားကလည်း, သော antebellum ကာလန်ကြီးချုပ် Recep Tayyip အာဒိုဂန် Bircan ဆင်တူ "ဝန်ကြီးချုပ် Ahmet Davutoglu တိုင်းဝန်ကြီးအနေဖြင့်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားများကိုဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်, Edirne Edirne ပြောပါတယ်" ဟုသူကပြောခဲ့သည်။ အဆိုပါအဆိုပြုချက် ...
Edirne, မျက်စိအမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းလှည့် 20 / 10 / 2016 Edirne, အမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းအားမိမိမျက်စိလှည် ့. : AK ပါတီ Edirne ပြည်နယ်ဧလိယသည်Akmeşe၏ Chairman, high-speed ကိုရထားစီမံကိန်းအားကျေးဇူးတင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Edirne သို့ပြောင်းရွှေ့ခံရဖို့အလားအလာလူဦးရေဖြည့်ဆည်းကြလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်ချက်ချင်းပြန်တမ်းခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ် ... Edirne, ပြီးစီးခဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းနှင့်ယခုနှစ်လျာထားသော finish ကိုအတွင်းတင်ဒါလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် သူသည်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းအားမိမိမျက်စိလှည့်။ ဥက္ကဋ္ဌ AK ၏ပါတီ Edirne ပြည်နယ်Akmeşeသည်ဧလိယကလည်း, "Edirne ၏ဆက်ပြောသည်တန်ဖိုးကိုဖြစ်လိမ့်မယ်" ဟုအမြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းကဆိုသည်ကလူဦးရေရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအလားအလာဖယ်ရှားပစ်ရန်အရေးကြီးပါသည်အပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး Edirne ပြောင်းရွှေ့လိမ့်မည်ဟုထောက်ပြသည်။ AK ပါတီ Edirne ပြည်နယ်ဧလိယသည်Akmeşe၏ Chairman, Edirne များအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သောဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ် ...
အဆိုပါGümrükçüoğlu၏နိုင်ငံတော်သမ္မတကိုထောကျပံ့ဖို့မြူတောင်ကေဘယ်လ်ကားစီမံကိန်းကို 29 / 05 / 2013 အဆိုပါGümrükçüoğlu Trabzon မြို့တော်ဝန် Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu၏နိုင်ငံတော်သမ္မတကိုထောကျပံ့ဖို့မြူတောင်ကေဘယ်လ်ကားစီမံကိန်းကိုသူတို့büyükşehirlခရီးသွားလုပ်ငန်းစီမံကိန်းများကိုအတူတကွတီထွင်ပါလိမ့်မည်ကိုထောကျပံ့မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောသည်။ Şalpazarıခရိုင်မြို့တော်ဝန် Fehmi Cengiz Gümrükçüoğluသွားရောက်နိုင်ငံသားတွေကသမ္မတစကားများသောနှင့်အတူလက်ဖက်ရည်သောက်သူကဆိုသည်büyükşehirlနှင့်အတူကုန်းပြင်အပါအဝင်တဦးတည်းစတုရန်းမီတာ၏ဝန်ဆောင်မှုဧရိယာသို့မသွားပါလိမ့်မယ်။ Şalpazarıမြို့တော်ဝန်ဒေသတွင်းအရေးကြီးတဲ့ခရီးသွားဧည့်များထဲမှအကောင်းတစ်ဦးခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းကိုဦးခေါင်းပေါ်သို့ပြုသောအမှုနှင့်စီမံကိန်းသောအခါအထဲတွင်ကေဘယ်လ်ကားမှာတည်ရှိပြီး အကယ်. "Fog တောင်တန်းGümrükçüoğluသည့်နှင်းလျှောစီးဓာတ်လှေကားအောင်ဘို့မေတ္တာရပ်ခံချက်ထောက်ခံမှုနေရာဖြစ်ပါသည်, Fehmi Cengiz Views ။ Fog တောင်ပုတဲ့ Metropolitan ပြီးနောက် '' s ကိုကေဘယ်လ်ကား ...
အတိုက်အခံပါတီထံမှ Ropeway စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ 17 / 04 / 2015 Ropeway စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုအဖွဲ့၏အတိုက်အခံပါတီ: မြို့ပြကေဘယ်လ်ကားစီမံကိန်းကိုဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ပြင်ဆင်ချက် related အစီရင်ခံစာတညီတညွတ်တည်းအတည်ပြုခဲ့ခဲ့သည်ဖွငျ့ Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်။ ဧပြီလ Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ညီလာခံသာမန်အစည်းအဝေး, ဟောင်းများပြည်နယ်ညီလာခံဟာအစည်းအဝေးခန်းမ Atilla ချေးငွေသမ္မတကျင်းပခဲ့သည်။ ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များတညီတညွတ်တည်းမဲသောအားဖြင့် CHP နှင့် MHP ကိုလည်းပေးထားထောက်ခံမှုကမွေးစားဇုံအစီအစဉ်အပြောင်းအလဲတွေလုပ်ဖို့ကော်မရှင်ရဲ့တောငျးဆိုခကျြနှင့်ဆက်စပ်သောမြို့ပြကေဘယ်လ်ကားစီမံကိန်းကိုအပေါ်ကောင်စီအစည်းအဝေးကို။ CHP အုပ်စုတစ်စု Sözcüs ကို Erdal Aktug "cable ကိုကားတစ်စီးစီမံကိန်းကိုအပေါ် Uludag တောင်တန်းကြီးတွေမြို့ကြီးများချီးကျူးကလေထုထဲတွင်ရှိရာကျဉ်းမြောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ဒေသသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရန်ခက်ခဲသည် ...
Tanrıverdi'yeထံမှ Spiller ထောက်ခံမှုသောတောင်ပေါ်ကေဘယ်လ်ကားစီမံကိန်းကို 25 / 08 / 2015 အဆိုပါTanrıverdi'yeကိုထောကျပံ့ဖို့ Spiller သောတောင်ပေါ်ကေဘယ်လ်ကားစီမံကိန်းကို: အ AK ပါတီ Huseyin Tanriverdi ၏ MKYK အဖွဲ့ဝင်စီမံကိန်း Spiller အမျိုးသားဥယျာဉ်သူတို့တူရကီထောကျပံ့ပေးလိမ့်မယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာသည့်နှင်းလျှောစီး LIFT စေရန်ပြင်ဆင်ထားကြလိမ့်မည်။ AK ပါတီ Manisa လက်ထောက် Huseyin Tanriverdi ဟောင်း AK ပါတီမှူးမတ်မြို့တော်ဝန်ဖြစ်သူ Omar Faruk Celik, Spil တောင်အမျိုးသားဥယျာဉ်အပေါ်လေ့လာတွေ့ရှိချက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သစ်တော Tanriverdi အလုပ်ဟာ Spil တောင်အမျိုးသားဥယျာဉ်ပြီးစီးအပေါ်သို့အရေးပါတဲ့ဗဟိုဌာနဖြစ်လာသည်ကယ်တင်ပြုစေမည်အကြောင်း, တဲရှုမြင်ကြသည်။ Spil တောင်တန်း Tanriverdi ကျနော်တို့တူရကီအတွက်စီစဉ်ထားတစ်ခုတည်းသောအမျိုးသားဥယျာဉ်, အမျိုးသားဥယျာဉ်များမှာ "အမျိုးသားပန်းခြံ၏တူရကီရဲ့တစ်ဦးတည်းသောအမျိုးသားဥယျာဉ်စီစဉ်ထားဧရိယာဖော်ပြထားသည်။ ဒါဟာအရာ, ပန်းခြံအတွင်းရှိယခုအချိန်အထိပြီးစီး ...
Evliya Celebi Way ကို
Lycian Way ကို
ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး Turhan မနက်စောစော Al-Adha ကို Message
Aladag နှင်းလျှောစီးဧရိယာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ကနေ Konya မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး
အဆိုပါ Edirne မြူနီစီပယ်ကနေ traffic သင်္ကေတပြစည်းမျဉ်းများ
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: အောက်တိုဘာလ41971 PehlivanköyKapıkuleလိုင်း-Edirne-အစ္စတန်ဘူလ်-Edirne လိုင်းများဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် 229 ကီလိုမီတာ ...
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: အောက်တိုဘာလ41971 PehlivanköyKapıkuleလိုင်း-Edirne-အစ္စတန်ဘူလ်-Edirne လိုင်းများဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် ...
Edirne, Edirne မြန်နှုန်းရထားထံမှ Bircan လက်ထောက်အခြားနွေဦးရှိခဲ့
အတိုက်အခံပါတီထံမှ Ropeway စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုအဖွဲ့
Tanrıverdi'yeထံမှ Spiller ထောက်ခံမှုသောတောင်ပေါ်ကေဘယ်လ်ကားစီမံကိန်းကို